Casharkan, waxaan ku arki doonaa mawduuca xirfadaha ee Ingiriisiga. Waxaan ku qori doonaa magacyada xirfadaha Ingiriisi iyo turkigooda, waxaan ku samayn doonaa layliyo ku saabsan xirfadaha Ingiriisi, iyo waxaan baran doonaa samaynta weedho ku saabsan xirfadaha ee English.
Barashada ereyada iyo odhaahyada ku saabsan shaqooyinka iyo xirfadaha ayaa lama huraan u ah ardayda iyo shaqaalahaba. Barashada mawduucan waxay sidoo kale ka dhigi doontaa carruurta inay ka hadlaan waxa ay qabtaan xubnaha qoyskooda. Waxay kaloo ka hadli karaan danahooda iyo waxay rabaan inay noqdaan markay koraan. Shaqaaluhu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay wax ka bartaan si ay uga hadlaan goobta shaqada ama u diyaargaroobaan waraysiyada shaqada.
Waxaan wadaagi doonaa gaar ahaan ereyada loogu isticmaalka badan yahay xirfadaha Ingiriisiga. Inta badan waxaad la kulantaa mowduucyada xirfadaha marka aad shaqo raadineyso, marka lagu weydiiyo wax ku saabsan shaqadaada ama nolol maalmeedkaaga. Mawduuca xirfadaha sidoo kale waxaa lagu bartaa waxbarashada aasaasiga ah. Mawduucan waxaa lagu xoojiyay gaar ahaan heesaha iyo ciyaaraha kaadhka ee ku habboon mawduuca.
Xirfadaha Ingiriisiga Inta Badan La Isticmaalo
Waxaa jira magacyo xirfadeed oo ka badan kuwa halkan ku qoran. Si kastaba ha ahaatee, waa kuwan magacyada xirfadda Ingiriisiga ee aad la kulmi karto inta badan. Waxaad xafidi kartaa erayadan adigoo ku celcelinaya oo aad uga taxadaraya inaad u isticmaasho jumlado.
Odhaahda guud ee xirfadlayaasha ahi ay sheegaan maalin kasta waqti xaadir ah jumlado ayaa la adeegsadaa.
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka A
Xisaabiye - Xisaabiye
Jilaa – Jilaa, jilaa
Jilaa – Jilaa
Xayeysiye – Xayeysiye
Safiirka – Danjire
Ogaysiiye - Ku dhawaaqe, soojeediye
Tababare – Tababare
Naqshadeeye – Naqshadeeye
Fanaanka – Fanaanka
Kaaliyaha - Kaaliyaha
Ciyaartoyga – Ciyaartoyga
Qore – Qoraa
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka B
Ilmo-xannaaneeye – Ilmo-ilaaliye
Banki - Bangiye
timo-jare - timo-jare
Blacksmith - birtuur
Darawalka baska - Darawal baska
Naag ganacsato ah - naag ganacsato ah
Hilible – Hilible
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka C
Kabtan – Kabtan
Nijaar - Nijaar
Qasnaji – Qasnaji
Nadiifiye - Nadiifiye
Karraaniga - Lap, karraaniga
Clown - dharbaaxo
Majaajiliiste - majaajiliiste
Injineer Kumbuyuutar - Injineer Kombuyuutar
Karso - kari
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka D
Qoob-ka-ciyaarka - Qoob-ka-cayaaraha
Dhakhtarka Ilkaha - Dhakhtarka Ilkaha
Naqshadeeye - Naqshadeeye
Agaasime – Agaasime
Dhakhtar - Dhakhtar
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka E
Tafatire – Tafatire
Koronto yaqaan - Koronto yaqaan
Injineer – Injineer
Ganacsade - Ganacsade
Fulinta - Fulinta
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka F
Beeraley – Beeraley
Filim sameeye – Filim sameeye
Maalgeliyaha - Maalgeliyaha
Dabdeeye – Dabdeeye
Kalluumeysatada - Kalluumeysatada
Ciyaaryahanka kubada cagta
Aasaasaha – Aasaasaha
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka G
Beeralayda – Beeralayda
Guddoomiye - Guddoomiye
Khudaarta cagaaran – Khudaar cagaaran
Dukaanka – Dukaanka raashinka
Waardiye – waardiye, ilaaliye
Hagaha - Hagaha
Jimicsiga – Jimicsiga
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka H
Koofiyad sameeyaha - Koofiyad sameeyaha
Maamule – Maamule
Daaweeyaha - Bogsiiye, bogsiiye
Taariikhyahan - taariikhyahan
Naag guri / guri guri
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka I
Illusionist - dhalanteed
Sawir-qaade – sawir-qaade
Kormeere – Kormeere
Rakibiyaha - Tuubiyaha
Macallin - Macallin
Ceymis – Ceymis
Layliyaha – Layliyaha
Turjumaan – Turjumaan
Waraysiye – Waraysiye
Hal-abuure – Hal-abuure
Baaraha – Baaraha
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka J
Nadiifiye - Nadiif, ilaaliye
Dahab - dahablaha
Suxufi – Wariye
Socdaalle - Shaqaale maalinle ah
Garsoore – Garsoore
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka K
Macalinka xanaanada – macalinka xanaanada
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka L
Qareen – Qareen
Badbaadiye - Badbaadiye
Linguist – Luuqad yaqaan
Muftaaxlaha - muftaaxlaha
Laxan-yaqaan - Heesaha
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka M
Saaxir - saaxir
Adeegto – Adeegto
Boostada – Boostada
Maareeyaha - Maareeyaha
Marine - Badmaax
duqa - duqa
Makaanik - makaanik
Rasuul - Rasuul
Umulisada – umulisada
Macdanta - Macdanta
Wasiir – Wasiir
Dhaqdhaqaaqa – Weeraryahan
Muusikiiste – Muusikiiste
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka N
Dhakhaatiirta neerfaha - Neerfaha
Nootaayo - Nootaayo
Nuun - Wadaad
Kalkaaliyaha - Kalkaaliyaha
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka O
Hawl-wadeen - Hawl-wadeen
Dhakhtarka indhaha - dhakhtarka indhaha
Abaabulaha – Qabanqaabiyaha
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka P
Rinjiyeyaal - Rinjiyeyaal
Dhakhtarka carruurta - dhakhtarka carruurta
Farmashiistaha - Farmashiistaha
Sawir qaade – Sawir qaade
Fiisigiste - Fiisigiste
Bianist - Bianist
duuliye - duuliye
Hal-abuure – Riwaayad
Tubiste - Tubiste
Abwaan – Abwaan
Bilayska - Sarkaal Boolis ah
Siyaasi – Siyaasi
Dherya-sameeyaha – dheryasameeyaha
Madaxweyne - Madaxweyne, Madaxweyne
Wadaad - Wadaad
Maamule – maamulaha dugsiga
Soo saaraha - Soo saaraha
Professor – Professor, bare
Dhakhtarka maskaxda - dhakhtarka maskaxda
Cilmi-nafsiga - cilmi-nafsiga
Daabacaha – Daabacaha
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka R
Hantiilaha – Hantiilaha
Soo dhawaynta – Soo dhawaynta
Wariye – Wariye
Cilmi-baare - Cilmi-baare
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka S
Badmareen - Badmaax
Saynisyahan - Saynisyahan
Farsameeyaha - Sawir-dhaliye
Addoon - Adeegto
Shepherd - Adhijir
Dukaanle - Farsamoyaqaan, dukaanle
Kaaliyaha dukaanka - Karraaniga, iibiye
Fanaanada - Fanaanada
Afhayeenka - Afhayeenka
Basaas - Basaas
Stylist - Stylist, naqshadeeye fashion
Ardayga - Ardayga
Kormeere - kormeere, kormeere
Dhakhtarka qalliinka - Dhakhtarka qalliinka
Dabaasha - Dabaasha
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka T
Dawaarle - Dawaarle
Farsamo yaqaan - Farsamo yaqaan
Tileer - Tilemaker
Tababare – Tababare, tababare
Baabuur- xamuulka qaada
Macallin – Macallin gaar ah
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka U
Dhakhtarka kaadi mareenka - urologist
Usher - usher, miis fadhiya
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka V
Valet - Valet, qafiif ah
Iibiyaha – Iibiyaha
Dhakhtarka xoolaha - Dhakhtarka xoolaha
Madaxweyne-ku-xigeenka – Madaxweyne-ku-xigeenka
Cod-qaade – Cod-yaqaan
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka W
Kabalyeeri - lab kabalyeeri
Kabalyeeri - kabalyeeri
Miisaanka culus - Culayska
alxanka - alxanka
Lagdinyahan – Lagdan
Qoraa – Qoraa
Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka Z
Saynisyahanka - Xayawaanka
Tusaalooyinka Weedho iyo Weedho La Xiriira Xirfadaha Ingiriisiga
Mawduuca xirfadaha dhexdiisa, maaha xirfadda oo keliya, laakiin sidoo kale qaababka qaar ee jumlada waa in la barto. Xirfadaha jumlada waxay qaataan horudhacyo kala duwan iyadoo loo eegayo shaqada, goobta shaqada ama magaalada.
Waxaa mudan in la sheego ka hor isticmaalka a iyo a, kuwaas oo lagu tilmaamay inay yihiin tilmaameyaal aan la cayimin. Jumlada dhexdeeda, "a iyo an" waa tibaaxayaal la isticmaalo ka hor magacyo la tirin karo.
Haddii xarafka koowaad ama xarafka koowaad ee magaciisu yahay shaqal, waa in la isticmaalo an, haddii uu aamusan yahayna waa in la isticmaalo a. A iyo an waxa loo adeegsadaa magacyo kali ah. Erayga ka dambeeya a iyo an ma noqon karaan jamac. Waa muhiim in la sameeyo jumlado adigoo fiiro gaar ah u leh xeerkan marka la isticmaalo ka hor magacyada xirfadlayaasha ah.
Qaar ka mid ah magacyada xirfadaha waxaa la sameeyaa iyadoo lagu darayo "-er, -ant, -ist, -ian" daba-galayaasha dhammaadka shaqallada ka tirsan shaqadaas. Tusaale ahaan, "wax baro, macalinka" iwm.
Marka lagu weydiiyo wax ku saabsan xirfaddaada, waa khalad inaad billowdo jumlad ah "Shaqadaydu waa". Waxaan ahay arday sidaaswaxaan ahay arday” waa in laga jawaabaa.
A iyo an waxa la adeegsadaa ka hor xirfadaha
Xaaskeyga waa macalin
Waxaan ahay a/an…
waxaan ahay macalin (Waxaan ahay macalin.)
Waxaan ka shaqeeyaa meelaha la isticmaalo
Waxaan ka shaqeeyaa dugsi (Waxaan ka shaqeeyaa dugsiga.)
Waxaan ka shaqeeyaa xafiis.
Waxaan ka shaqeeyaa dugsi
Waxaan ka shaqeeyaa warshad
Waxaan ka shaqeeyaa Paris.
Waxaan ka shaqeeyaa Faransiiska.
Waxaan ka shaqeeyaa waaxda suuq-geynta.
Waxaan ka shaqeeyaa kheyraadka aadanaha.
Waxaan ka shaqeeyaa iibka
Waxaan ka shaqeeyaa maaliyadda.
Waxaan ka shaqeeyaa cilmi-baaris caafimaad.
Waxaan ka shaqeeyaa la-talin
Waxaan u shaqeeyaa sidii a/an…
Waxaan u shaqeeyaa sidii injineer. (Waxaan u shaqeeyaa sidii injineer.)
*** Markaad rabto inaad faahfaahin dheeraad ah ka bixiso shaqada, waxaad isticmaali kartaa qaababka jumlada "Aniga ayaa mas'uul ka ah..." "Anigaa mas'uul ka ah..." ama "Shaqadayda waxay ku lug leedahay..."
anigaa ka masuula cusboonaysiinta website-ka shirkadda.
anigaa masuul ka ah wareysiga musharaxiinta shaqooyinka.
Shaqadayda Waxay ku lug leedahay siinta tamashlaha madxafka.
Tusaalaha Su'aalaha ee Xirfadaha Ingiriisiga
Qaababka qaarkood ayaa guud ahaan lagu isticmaalaa Ingiriisiga. Mid ka mid ah waa qaababka su'aalaha. Erayada Ingiriisiga u dhigma ee ereyada shaqo iyo shaqo waa "shaqo" iyo "shaqo". Marka xirfadaha iyo shaqooyinka la sheego, waxay qaataan jihooyinka jamac-ahaaneed oo ah "shaqo" iyo "xirmo".
Maxay qabtaan + magac jamac ah + sameeyaan?
Muxuu + sameeyaa + magaca shaqada ee gaarka ah + sameeyaa?
Muxuu sameeyaa macalinku?
(Macallin muxuu sameeyaa?)
Maxay dhakhaatiirtu qabtaan?
(Maxay dhakhaatiirtu qabtaan?)
(Waa maxay shaqadaadu?)
Weedha sare, "iyada, kiisa, kooda" waxa loo isticmaali karaa halkii erayga "adiga".
Marka aad rabto in aad wax ka waydiiso xirfadaada markaad sheekeysanayso;
Ka waran shaqadaada?
Haddaba waa maxay xirfaddaadu?
shaqada dhakhtarkas isbitaalka. (Dhakhtar ayaa ka shaqeeya isbitaal.)
Aaway dhakhtars shaqada? (halkee ayay dhakhaatiirtu ka shaqeeyaan?)
Waxay ka shaqeeya at isbitaalka (Waxay ka shaqeeyaan cisbitaalka.)
Tusaalooyinka Weedhoyada Ku Saabsan Xirfadaha Ingiriisiga
Waxaan ahay boolis (waxaan ahay booliis)
Waa dabdeeye. (Waa dabdeeye)
Waxaan ahay dhakhtar Waan baari karaa bukaanada. (Anigu waxaan ahay dhakhtar. Waan baari karaa bukaanada.)
Waa adeege. Wuxuu qaadan karaa amar oo u adeegi karaa. (Waa adeege. Wuu qaadan karaa dalabaad iyo adeeg.)
Waa timo-jare. Wuxuu jari karaa oo naqshadayn karaa timaha. (Iyadu waa timo-jare. Way jarri kartaa oo way habayn kartaa timaha.)
Waa darawal. Wuxuu kaxeyn karaa baabuur iyo xamuul. (Waa darawal. Waxa uu kaxaysan karaa baabuur iyo baabuur.)
Waxaan ahay cunto kariye Waxaan karin karaa cuntooyin macaan. (Waxaan ahay cunto kariye. Waxaan karin karaa cuntooyin macaan.)
Waa maxay shaqadiisa/xirfaddiisa/shaqadiisa? (Waa maxay shaqadiisu? / muxuu sameeyaa?)
Waa qareen. / Wuxuu u shaqeeyaa sidii qareen. (Waa qareen. / Xirfadiisu waa qareen.)
Waa macalimad dugsigeyga. (Iskuulkayga ayuu wax ka dhigaa.)
Waxa uu ka shaqeeyaa soo dhaweyne ahaan shirkad. (Waxay ka shaqaysaa soo dhawayne shirkad ahaan.)
waxaan ahay tarjumaan Shaqadaydu waa tarjumaada dukumentiyada. (Waxaan ahay turjumaan. Shaqadaydu waa inaan turjumo dukumentiyada.)
Dhakhtarka indhaha ayaa fiiriya indhaha dadka wuxuuna sidoo kale iibiyaa muraayadaha. (Takhtarka indhaha ayaa fiiriya indhaha dadka wuxuuna iibiyaa muraayadaha.)
Takhtarka xoolaha waa takhtar daaweeya xoolaha jiran ama dhaawacan. (Dhakhtarka xoolaha waa takhtar daaweeya xoolaha dhaawacan ama buka.)
Wakiilka gurigu wuxuu kaa caawinayaa inaad iibsato ama iibiso gurigaaga ama falaatkaaga. (Realtor wuxuu kaa caawinayaa inaad iibsato ama iibiso dabaqyo.)
Shaqaalaha maktabadda ayaa ka shaqeeya maktabadda. (Labareeraha ayaa ka shaqeeya maktabadda.)
Boostada ayaa waraaqo iyo baakado kuugu keenaya gurigaaga. (Boostada ayaa kuu soo direysa boostada ama baakadaha gurigaaga.)
Gawaarida dayactirka makaanigga. ( Makaanigga inji wuxuu hagaajiyaa baabuurta.)
Witer/witress ayaa kuugu adeegaya makhaayad. (Kabalyeerigu wuxuu kuugu adeegayaa makhaayadda.)
Darawal gaari xamuul ah ayaa wata gaari xamuul ah. (Darawalka gaadhigu waxa uu wadaa gaadhi xamuul ah.)
Su'aalaha Layliska Xirfadaha Ingiriisiga
Ma tahay harqaanle? (Ma dawaarle baa tahay?)
Haa, waxaan ahay harqaanle (Haa, waxaan ahay harqaanle.)
Muxuu macalinka Ingiriisigu samayn karaa? (Macallim Ingiriisi muxuu samayn karaa?)
Macallin Ingiriisi ayaa bari kara Ingiriisiga. (Macallin Ingiriisi ah ayaa bari kara Ingiriisiga.)
Muxuu samayn karaa beeralay? (Muxuu samayn karaa beeralay?)
Waxa uu beeran karaa miraha iyo khudaarta. (Waxay beeran kartaa miraha iyo khudaarta.)
Garsooruhu ma hagaajin karaa baabuurta? (Xaakimku ma hagaajin karaa baabuurta?)
Maya, ma awoodo. (Maya, ma dhici karto.)
Misaki muxuu sameeyaa? (Muxuu sameeyaa Misaki?)
Waa naqshadeeye. (waa naqshadeeye.)
Makaanigu timaha ma jari karaa? (Makaanigu timaha ma jari karaa?)
Maya, ma awoodo. Wuxuu hagaajin karaa baabuurta. (Maya ma awoodo. Wuxuu hagaajin karaa baabuurta.)
Xagee ka shaqeysaa? (Xaggee ka shaqeysaa?)
Waxaan ka shaqeeyaa shirkad caalami ah. (Waxaan ka shaqeeyaa shirkad caalami ah.)
Ma shaqo gudaha ah baa mise bannaanka? (Ganacsiga gudaha ama ganacsiga dibadda?)
Waa shaqo gudaha ah. (Shaqo gudaha ah.)
Ma haysaa shaqo? (Shaqo ma haysaa?)
Haa, waxaan leeyahay shaqo (Haa, waxaan leeyahay shaqo.)
Shaqooyinka Ingiriisiga: Shaqooyinka Ingiriisiga
Shaqooyinka & Xirfadaha : Shaqooyinka & Xirfadaha
Sidee shaqo lagu helaa?
Shaqo hel: shaqo raadso
Xirfadda riyada : Xirfadda riyada
Tusaalaha Wadahadalka Xirfadaha Ingiriisiga
Mudane Bean:- Hello Mr Jones, maxaad u qabataa nolol maalmeedka?
Mr Jones:- Waxaan ahay macalin dugsi sare.
Mudane Bean:- Macallin? taasi waxay u egtahay shaqo badan oo adag.
Mr Jones:- Mararka qaar. Waxaan wax bara carruurta dugsiga sare.
Mudane Bean:- Ma jiraan arday badan oo fasalkaaga ah?
Mr Jones:- Inta badan fasalada waxaa dhigta ilaa konton arday celcelis ahaan.
Mudane BeanMa jeceshahay shaqadaada?
Mr Jones:- haa, waa mid aad u faa'iido leh. Waxbaridda dugsiga sare way sahlan tahay marka xigta. Ardaydu way ka xun yihiin.
Qoraalka Xoojinta Mawduuca Xirfadaha Ingiriisiga
Marka si rasmi ah laguugu ogolaado shaqo cusub oo shirkad ah, waxaa shaqaaleysiiyay shirkadu. Marka lagu shaqaaleysiiyo, waxaad noqonaysaa shaqaale ka tirsan shirkadda. Shirkadu waxay noqonaysaa shaqo-bixiyahaaga. Shaqaalaha kale ee shirkadu waa asxaabtaada ama asxaabtaada. Qofka kaa sarreeya ee mas'uulka ka ah shaqadaada waa madaxaaga ama kormeerahaaga. Waxaan badiyaa isticmaalnaa weedha shaqo tag si aan u shaqo tago oo aan uga tago shaqada si aan uga tago shaqada.
Tusaale ahaan; "Waxaan shaqada aadaa 8:30, waxaana shaqada ka baxaa 5."
"Waxaan aadaa shaqada 8:30 waxaana ka baxaa 5"
Safarkaagu waa inta ay kugu qaadanayso inaad shaqada ku tagto baabuur ama gaadiid dadweyne.
Tusaale ahaan, "Waxaan haystaa safar 20-daqiiqo ah."
"Waxaan haystaa safar 20-daqiiqo ah."
Shaqooyinka qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad meel fog ka shaqeyso. Tani waxay la macno tahay inaad gurigaaga ama meel kasta oo kale kaga shaqayn karto isku xidhka interneedka oo aad kula xidhiidhi karto asxaabtaada talefan, iimaylka iyo fiidyow conferencing. Shaqaale ka tirsan shirkadda, waxaad shaqaysataa lacag, taas oo ah, lacagta aad si joogto ah u hesho shaqadaada. Waa khalad in ereyga "guul" la isticmaalo, oo macneheedu yahay guul, iyadoo jumlada halkan laga dhisayo.
Kelmad khaldan: "ku guulaysato mushahar"
Odhaah sax ah: "hel"
Haddii aad go'aansato inaad shaqadaada ka tagto, waxaa jira saddex fal oo aad isticmaali karto:
Waxaan doonayaa inaan ka tago shaqadayda. - Waan ka tagayaa shaqadayda.
Waan ka tagayaa shaqadayda. - Waan ka tagayaa shaqadayda.
waan iska casilayaa - Waan iscasilayaa.
"Jooji" waa mid aan rasmi ahayn, "is-casilaad" waa mid rasmi ah, iyo "ka tag" waxaa loo isticmaalaa odhaah rasmi ah ama mid aan rasmi ahayn.
Marka qofka da'da ah uu go'aansado inuu joojiyo shaqada, xaqiiqadu waa inuu ka fariisto. Waddamada intooda badan, dadku waxay ka fariistaan ​​da'da 65. Haddii aad tan ka weyn tahay oo aad joojisay shaqada, waxaad ku qeexi kartaa heerka aad hadda tahay "Waan Ka fariistay". "Waan ka fariistay" Waxaad ku sharaxi kartaa jumlada.
Waxaan rabnaa inaan wadaagno qaabab aad ku isticmaali karto wareysiga shaqada. Waa markii aad tusi lahayd qofka aad tahay iyo sababta aad u tahay qof wanaagsan oo aad kala shaqeyso waraysiga Ingiriisiga. Waa kuwan tilmaanta loo adeegsan karo waraysiga Ingiriisiga;
Fudud-socod: Si loo muujiyo inaad tahay qof hawl-fudud.
Ka go'an: Xasilooni
Focused: Diirad saarid
Habka: Qof u fiirsada faahfaahinta.
Firfircoon: Awood u leh in uu wax qaado. Shaqaale firfircoon.
Waraystuhu wuxuu kaloo rabi doonaa inuu ogaado waxaad ku fiican tahay. Erayada aad isticmaali karto si aad u muujiso awoodahaaga iyo xirfadahaaga;
Kartida hawlo badan - Wacyigelinta hawlaha badan
Samee ilaa wakhtiga kama dambaysta ah
Si wanaagsan ula xiriir
Ka shaqee jawi caalami ah iyo dadka aduunka oo dhan - xirfadaha isgaarsiinta caalamiga ah
Ku hadal luqadaha qalaad - Xirfadaha luqadda qalaad
Xamaasad - Jacayl shaqo, xamaasad
Kahor intaanan u gudbin macnaha xirfadaha Ingiriisiga ee aadka loo isticmaalo, waxaan jeclaan lahayn inaan wadaagno dhowr siyaabood oo fudud oo lagu xafido erayada Ingiriisiga.
Habka caanka ah ee lagu xafido erayada waa isticmaalka mnemonics, kuwaas oo ah marin-gaab maskaxeed oo kaa caawinaya inaad xasuusato fikrado ama erayo kakan. Si aad u barato erayo badan oo degdeg ah, fikradda ugu fiican waa in la qeexo: Halkii aad qori lahayd liisaska kelmadaha, isku day in aad jumlado geliso. Habkaas, waxaad garanaysaa sida ereyga loo isticmaalo nolosha dhabta ah.
Filimada, bandhigyada TV-ga, buugaagta, podcasts ama heesuhu maaha kaliya ilo wanaagsan oo laga helo ereyada ugu caansan, waxay sidoo kale kaa caawin karaan inaad xafiddo erayada. Ku dhawaaqida ereyada Ingiriisiga oo badan ayaa u sahlaysa in la xafido.
Qof kastaa si kala duwan ayuu wax u bartaa, markaa haddii aanad garanayn waxa ku anfacaya, isku day siyaabo kala duwan intii suurtogal ah ama isku day isku darka. Flashcards, apps, lists, games ama post-its waa habab aad u fiican oo lagu xafido erayada.
Erayada Ingiriisiga Shaqooyinka ee ardayda dugsiga hoose;
Waxaan ahay beeralay
Waxaan ahay darawal bas
Waxaan ahay dhakhtar
Samee - samee - samee - samee!
Waxaan ahay dhakhtarka ilkaha
Waxaan ahay sarkaal booliis
Waxaan ahay cunto kariye
Waxaan ahay timo-jare
Waxaan ahay kalkaaliso caafimaad.
waxaan ahay askari
Waxaan ahay dab-demis
Samee - samee - samee - samee - samee - samee!
Tilmaanta Turkiga ee heesta;
Waxaan ahay dhakhtar.
Samee - samee - samee!
Waxaan ahay kabiir.
Waxaan ahay kalkaaliye
Samee - samee - samee - samee - samee!
# Xirfadaha Ingiriisiga Inta Badan La Isticmaalo
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka A
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka B
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka C
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka D
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka E
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka F
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka G
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka H
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka I
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka J
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka K
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka L
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka M
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka N
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka O
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka P
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka R
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka S
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka T
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka U
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka V
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka W
# Xirfadaha Ingiriisiga oo ka bilaabmaya Xarafka Z
# Tusaalooyinka Weedho iyo Weedho La Xiriira Xirfadaha Ingiriisiga
# Tusaalaha Su'aalaha ee Xirfadaha Ingiriisiga
# Tusaalooyinka Weedhoyada Ku Saabsan Xirfadaha Ingiriisiga
# Su'aalaha Layliska Xirfadaha Ingiriisiga
# Tusaalaha Wadahadalka Xirfadaha Ingiriisiga
# Qoraalka Xoojinta Mawduuca Xirfadaha Ingiriisiga
Tags: Shaqooyinka Ingiriisiga fasalka 10aad, Shaqooyinka Ingiriisiga fasalka 9aad, xirfadaha Ingiriisida